Baaldi Wareegga Taxanaha Y
Sida loo aqoonsado calaamadaynta dib u warshadaynta balaastikada ee alaabta caagga ah?
Summada dib-u-warshadaynta caagga waxaa sameeyay Ururka Warshadaha Caagagga sannadkii 1988-kii. Calaamadda dib-u-warshadaynta waxay ku dhex calaamadin doontaa weelka ama xirmada lambarka 1 ilaa 7 ee calaamadda saddex-xagalka ah.
Koodhka aqoonsiga alaabta caagga ah
Dhammaanteen waan ognahay in badeecooyinka caagga ah ay kala sooci karaan oo dib-u-warshadayntu ay aad muhiim noogu tahay.Waxay noqon kartaa in la ilaaliyo kheyraadka oo laga ilaaliyo deegaanka wasakhowga caagga ah iyo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo.Waxay noqon kartaa dib-u-habayn lagu sameeyo qashinka caagga ah oo loo beddelo badeecooyin cusub oo faa'iido leh ...
Sida loo soo qaado alaabtaada baakadaha saxda ah?
Baakadaha balaastigga ah waxay leeyihiin codsiyo aad u ballaaran oo nolol maalmeedkeena ah. Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa baakadaha wax soo saarka beeraha, warshadaha dhaqida, warshadaha kiimikada, warshadaha daawooyinka, cuntada iyo cabitaanka, alaabta dhismaha iyo wixii la mid ah. xirxira...
Waa maxay walxaha PP?
PP, oo sidoo kale loo yaqaan polypropylene, waa polymer thermoplastic loo isticmaalo codsiyo kala duwan oo kala duwan.Polypropylene waxaa iska leh kooxda polyolefins.Waa shay cad, adag, dabacsan, mashiin ahaan ruxay.Maaddada PP sidoo kale waxaa laga dhigi karaa mid dhalaalaya marka aan midab lahayn ...